Home News Kooxda Qaska ka wada Baarlamanka Muxu Qorshahoodu yahay?
Kooxda Qaska ka wada Baarlamanka Muxu Qorshahoodu yahay?
Waxa weli tagan oo hadba weji cusub yelanaya Mooshinka Gudoomiye Jawaari iyado Gudoonka sare ee Golaha Shacabka uu qilaaf so kala dhex galay.
Ololaha Xukuumadu ay wado aya wejiyo cusub yeelanay iyado Godomiye ku xigeen 1aad ee baarlamanka uu sii shidayo Qalalaasaha Xukuumadu ay wado.
Muudey aya abuuraya xaalad daganansho la’aan oo ka dhex tagan Golaha shacabka iyado uu isku dayaayo in uu baal maro Xeer hoosaadka Baarlamanka.
Tallaabooyinka Xukumada iyo C/weli Muudey ayaa lagu tilmaamay inay tahay inaan xilligan mooshinka la furin si culeys loogu saaro Guddoomiye Jawaari inuu is casilo ama waanwaan lagula galo inuu iskiisa u tanaasulo, iyadgoo xaqiiqsaday inaysan heli karin codad ku filan oo xilka looga qaado.
Arinkan aya ah mid ku cusub siyaasada Soomaaliya iyado Golohu laga hor istagay in ay shaqadoodu gutaan xili dalka uu ka socdo boob.